8Yar (အိပ်ယာ): 2012
Posted by 8Yar at 8:00 am 8 comments
ရင်းနှီးပေမယ့် မကျွမ်းကျင်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖောင်ဖွဲ့နေတယ်။
မဲ့သံ ရွဲ့သံတွေနဲ့ အတူ
ရှိုက်သံတွေ၊ ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေကို မြင်နေရတယ်။
သရုပ်ပြကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းအောက်မှာ ပျက်ပြားသွားရမှာလား??
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်လို့ ထင်နေကြတာလား??
ခင်ဗျား မပြောလဲ ကျွန်တော်ဖြေမယ်
စလုံးမှာ အသက်ကို ငုံ့ပြီးရှူတတ်ဖို့လိုမယ် ဆိုတာ.....
13rd Sep 2012
Posted by 8Yar at 11:03 pm 14 comments
Posted by 8Yar at 11:05 am5comments
Posted by 8Yar at 5:06 pm9comments
Posted by 8Yar at 10:41 am6comments
Posted by 8Yar at 4:20 pm 12 comments
Posted by 8Yar at 9:55 am6comments
Posted by 8Yar at 5:27 pm6comments